बुधबार, ४ आषाढ २०७६,	आहाखबर	9.96K
गुठीसम्बन्धी विधेयक खारेजीको माग गर्दै काठमाडौंको माइतीघरमा विशाल प्रदर्शन भएको छ ।
सरकारले मंगलबार गुठी सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएपनि काठमाडौंको माइतीघरमा विशाल खरबारी सभा आयोजना भइरहेको छ । माइतीघरको खरबदारी सभामा भाग लिनका लागि काठमाडौं उपत्यकाका लगभग सबै स्थानबाट गुठी सरोकारवाला तथा गुठीयारहरु माइतीघरमा भेला भएका छन् ।
खबरदारीसभा अघि ‘हाम्रो संस्कृति कसैको दाइजो होइन’, ‘सम्पदा मास्न पाइँदैन’लगायतका प्लेकार्ड बोकेका प्रदर्शनकारीहरुले उपत्यकामा र्‍याली निकालेका छन् । त्रिपुरेश्वर, थापाथली लगायतका क्षेत्रबाट र्‍याली निकालिएको हो । र्‍याली माइतीघर मण्डलामा आयोजित खबरदारी सभामा मिसिएको छ ।
बिहान ११ बजे माइतीघर मण्डलामा हुने भनिएको सभामा भाग लिनका लागि स्वत: स्फूर्त रुपमा काठमाडौं उपत्यकाका नेवार समुदाय सडकमा ओइरिएका छन् ।
नेपालको राष्ट्रिय झण्डा हातमा बोकेर नेवारी धुनको लयमा नाराबाजी गर्दै उनीहरु मण्डलामा जम्मा भएका हुन् ।
नेवार समुदायले आज किजा पूजा मनाउँदै !
दिदीबहिनीबाट दाजुभाईको दीर्घायुको कामना गर्दै आज भाइटीका लगाइँदै
म्हः पूजा र भाई टीका एकै दिन परेपछि नेवार समुदाय अलमलमा
लक्ष्मी पूजाको दिन भुलेर पनि नगर्नुस् यी काम, लक्ष्मी ढोकाबाटै फर्किन्छिन् !
यमपञ्चकको दोस्रो दिन : बिहान कुकुर पूजा र साँझ लक्ष्मीको पूजा, आज लक्ष्मी जयन्ती समेत
तिहार : आजबाट यमपञ्चक सुरु, घर घरमा कागको पूजा गरिँदै
सरकारले कात्तिक १३ गते सार्वजनिक बिदा दिने
दिपावलीमा महालक्ष्मीको साथमा गणेश र सरस्वतीको पूजा किन गरिन्छ ?